विद्यार्थीको पहिलो रोजाई बन्दै क्यानडा , कस्ता छन् अवसर ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
शुक्रवार, पुस २३ २०७८
उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि क्यानडा जाने विद्यार्थी बढ्न थालेका छन्। विशेषगरी नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, आइटी, विज्ञान, होटेल व्यवस्थापन, टुरिज्मलगायत विषय पढ्नका लागि विद्यार्थीले क्यानडालाई रोज्न थालेका हुन्।
क्यानडा उत्कृष्ट गन्तव्य भएकोले पनि क्यानडा जाने विद्यार्थीहरुको सङख्या बढ्न थालेको छ । यस्ले पनि क्यानडा पछिल्लो समय धेरै विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्रसमेत बनेको पृष्टि गर्छ । कोभिड १९ को महामारीले पुरा विश्व नै आक्रान्त बनेको बेला प्राय सबै देशले बोर्डर बन्द गरेको अवस्थामा समेत क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको लागी ढोका खोलेको कारणले पनि क्यानडा तर्फ नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । धेरैको रोजाइमा परेको क्यानडा जान के कस्ता प्रक्रियाहरू छन् ? हामीले विद्यार्थीका मनमा आउने विभिन्न जिज्ञासा मेटाउन यो सामाग्री तयार पारेका छौँ ।
क्यानडा किन ?
क्यानडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि सेवा सुविधा पनि राम्रो छ । अध्ययन शुल्क र ट्युसन फी सस्तो छ ।
आफ्नो चाहनाअनुरूप उचित शैक्षिक शुल्क, छात्रवृत्तिको सुविधा पाउन सकिने भएकोले पनि क्यानडा नेपालीका लागि एक उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य हुनसक्छ । क्यानडामा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू छन् । पढाइसँगै छिट्टै काम गर्ने अनुमति पाउने र पढाइ सकिएपछि नै पिआर पाउने सम्भावना बढी हुने भएकाले पनि क्यानडा राम्रो विकल्प हुनसक्छ । पछिल्लो समय क्यानडा जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ ।
नेपाली विद्यार्थीले क्यानडा रोज्नुपर्ने कारण यति मात्रै होइन । यसका साथै क्यानडामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले विभिन्न छात्रवृत्ति पनि पाउने गर्छन् । क्यानडामा सामान्यतया मेरियटबेस छात्रवृत्ति पाउन सकिन्छ । छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना यहाँ प्राप्त गरेको जिपिए र क्यानडा गएर प्राप्त गरेको जिपिएमा निर्भर हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति र कामको अवसर नै क्यानडाको विशेषता हो । क्यानडाका विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई क्षमता अनुसारको १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति सुविधा दिने गरेका छन् ।
बजारमा क्यानडाको मौसम बस्नको लागि उत्तम छैन भन्ने खालका हल्ला सुनिन्छ तर लामो समय देखि यही क्षेत्रमा काम गरेका कन्सल्टेन्सी डिएएच का प्रबन्धक अभिनय अधिकारी यस्ता निराधार हल्लाको विश्वास नगर्न सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार क्यानडा अध्ययन साथ साथै त्यहाँका थुप्रै ठाउँ बस्नका लागी मौसमको हिसाबले पनि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन ।
सजिलै भिसा पाइन्छ त ?
सबै कागजातहरू राम्रोसँग मिलाएको र प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा क्यानडाको भिजा पाउन गाह्रो छैन । क्यानडा जान भाषा परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अध्ययनको क्रममा ग्याप हुनुहुँदैन । एक वर्षको ट्युसन फि पहिले नै तिर्ने र आवश्यक कागजातहरू राम्रोसँग तयार गर्न सके क्यानडाको लागि भिसा सजिलै लाग्छ ।
क्यानेडियन स्टडी सेन्टर इङ्क, क्यानडाका प्रबन्धक हरि अधिकारी भन्छन्, “सबै भन्दा सुरुमा क्यानडामा विद्यार्थी भिसा आवेदन गर्न चाहेको कलेज वा युनिभर्सिटी बाट स्वीकृति पत्र प्राप्त गर्नुपर्छ।” ब्याचलर पछि धेरैजसो विद्यार्थी पोस्ट ग्र्याजुएसन कोर्सहरूमा जाने गरेको र एक वर्षको शुल्क तिरेर जाँदा भिसालाई पनि सजिलो हुने कुरा उनले बताए ।
प्लस टु पछि आर्थिक रूपमा मध्यम भएकाले डिप्लोमा पढ्न गएको देखिन्छ । आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरू ब्याचलर पढ्न गएको देखिन्छ । ब्याचलरपछि एमबिएबाहेक अरू मास्टर्स प्रोग्राममा भने क्यानडामा एडमिसन पाउन गाह्रो छ । तर, असम्भव भने होइन ।
बजारमा डिप्लोमा पढ्न जाँदा भिसा नदिने हो कि भन्ने अन्योल पनि हुन्छ । मास्टर्स डिग्री हासिल गर्न जाँदा खर्च धेरै लाग्छ भन्ने पनि जिज्ञासा सुनिन्छ । तर, यी सबै निराधार हल्लाहरू हुन् ।
क्यानडा जान लाग्ने खर्च विद्यार्थीले रोज्ने कोर्स र युनिभर्सिटी वा कलेज अनुसार फरक पर्ने गर्दछ । सामान्यतः क्यानडा अध्ययनका लागि जान १८ देखि २२ लाख खर्च लाग्छ ।
कामको अवसर के छ ?
क्यानडा जाने नेपाली विद्यार्थीहरू ले रोजगारीको पनि राम्रो अवसर पाउँछन् । विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा सातामा २० घण्टा वर्क पर्मिट पाउँछ । बिदाका बेला सातामा ४० घण्टासम्म काम गर्ने अवसर पाउँछन् भने दुई वर्षको कोर्स सकेपछि पोस्ट ग्र्याजुएसन वर्क पर्मिट प्रोग्रामअन्तर्गत ३ वर्षका लागि काम गर्ने अनुमति पाउँछ ।
एसओपी कसरी लेख्ने ?
सामान्यतः एसओपीमा आफ्ना योजना के छन् ? के गरिरहेको छु, क्यानडा किन जाने, क्यानडाबाट फर्केपछि के गर्ने भन्नेजस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्दछ । नेपाली विद्यार्थीहरूले एसओपी धेरै राम्रो लेख्छन् भन्ने हुँदैन । एसओपी धेरै राम्रोभन्दा पनि सरल र वास्तविक हुनु पर्ने कुरा सिआइसि एजुकेसन हबका प्रबन्धक दिपेश केसी बताउँछन् । उनका अनुसार सरल र सामान्य भाषामा लेखिएको एसओपीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ ।
पिआर पाउने सम्भावना कति हुन्छ ?
सेटलमेन्टका लागि क्यानडा राम्रो देश हो । विदेशमा नै स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहनेका लागि क्यानडा राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ । त्यहाँ गएको तीन देखि पाँच वर्षभित्र पिआर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
बसोबासका लागी अनुकूल मौसम र पढाइसँगै पाइने कामको अवसरले पनि क्यानडा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । यति मात्रै होइन सर्वसुलभ खर्चमा उत्कृष्ट शिक्षा, उपयुक्त छात्रवृत्ति र सस्तो ट्युसन फी पनि क्यानडा रोज्नुपर्ने कारण भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय धेरैको रोजाई मा परेको देश क्यानडा पठाउने थुप्रै कन्सल्टेन्सी पनि बजारमा देखिएका छन्, तर सबैले सही परामर्श दिन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसैले कोही पनि विद्यार्थी झुकिएर वा ठगिएर क्यानडा नपुग्न एक पटक सबै प्रक्रिया बुझ्न र भरपर्दो र अनुभव भएका कन्सलटेन्ट्हरुको परामर्श लिन जरुरी हुन्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, पुस २३ २०७८ २०:४२:१८
मासिक रु ९९९ मा २०० एमबीपीएस इन्टरनेट